PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - KWEHLUKENE IMIBONO NGOKUBOSHWA KWESANGOMA ESITHOLAKALE NEZICUBU
KWEHLUKENE IMIBONO NGOKUBOSHWA KWESANGOMA ESITHOLAKALE NEZICUBU
Ilanga - 2018-11-29 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU
LUVUSE ingebhe kwamanye amalungu omphakathini waseMaqongqo, KwaMaphumulo, lwadala ukwahlukana kwemibono udaba lokuboshwa kwesangoma sendawo okuthiwa kutholakale izicubu zomuntu nesibhamu esingekho emthethweni emzini waso ngeSonto.
Simuncu isimo emphakathini wakule ndawo njengoba kuthiwa uMnu Cebo Mkhize (32), uyaziwa ngomsebenzi wakhe oseqophelweni eliphezulu wokwelapha, kanti amanye amalungu omphakathi asola umkhuba. UMnu Mkhize uboshwe noNkz Nondumiso Dlamini (27).
Le ndaba abantu baphuza ngayo amatiye, idume cishe iKwaMaphumulo yonke njengoba bebekhuluma ngayo ngisho edolobheni lakhona.
Ngokuthola kweLANGA, amaphoyisa agasele esigodlweni sikaMnu Mkhize ngeSonto ekuseni, akucaci ukuthi ancinzwe ngubani indlebe. Amalungu omphakathi akhulume neLANGA, athi asola ukuthi kukhona otshale lezi zinto esigodlweni sikaMnu Mkhize wabe esethinta amaphoyisa.
Athi akusho lokhu ngoba ngosuku aboshwe ngalo, ufike umuzi wakhe ugqekeziwe, kwazise ubengekho eyokhipha ithwasa komunye umuzi, khona endaweni. Elinye ilungu lomphakathi elikhulume neLANGA edolobheni lithe: “Ngizwile ngaleyo nyanga eboshwe nezicubu zabantu. Yize ngingayazi, kodwa idumile ngoba kuthiwa iyawazi umuthi, kanti abaningi bebehamba kuyona.”
UMnu Joseph Ngiba oyinduna kule ndawo, uthe yize kungekho umuntu oke waya kuyena eyombikela ngalolu daba, kodwa uwazwile amahemuhemu ngokutholwa kwezicubu.
“Lo mfana ngiyamazi, kodwa lolu daba kangizange ngilubike ngisho emkhandlwini (wenkosi) ngoba akekho umuntu oke weza kimina ezongichazela ukuthi bekwenzenjani. Nami ngisezwa ngabantu nje bekhuluma ngalo,” kusho uMnu Ngiba.
UMnu Mthokozisi Dlamini, oyilungu lekomidi lewadi kule ndawo, uthe ngokuzwa kwabo, umsolwa ubengekho ngoMgqibelo ebusuku eyokhipha ithwasa ngakhona endaweni.
“Sizwe kuthiwa ubuye ekuseni sekugqekeziwe, waya emaphoyiseni eyowabikela ngoba bekunezinto zakhe ezithathiwe. Uthe nje ebuya, abe engena amaphoyisa, abheka, athola lokho okunezinsolo zokuthi kukhona okubekile,” kusho yena. Uthi yize ithusa le ndaba, kodwa umphakathi kawukholwa ukuthi ngezakhe ngoba umsolwa uyaziwa endaweni futhi akukho okubi adume ngakho.
“Kusethusile lokhu ngoba ungumuntu osemusha futhi ongazihlanganisi nento engalungile, uzenzela umsebezi wakhe wamakhambi,” kusho uMnu Dlamini.
Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuboshwe abasolwa ababili okungowesilisa nowesifazane, babhekene necala lokutholakala nezicubu zomuntu nesibhamu esingekho emthethweni. Uthe bavelile eNkantolo yeMantshi yaKwaMaphumulo ngoMsombuluko. Bazophinde bavele kule nkantolo ngoMsombuluko ozayo.